Ity lahatsoratra mitondra ny lohateny hoe “Ny akanjo quandary: 'Tena fahadisoan-kevitra. Fa ny zavatra rehetra dia fahadisoan-kevitra '” nosoratan'i Jessica any New York Glenza, fa theguardian.com ny zoma 27 Febroary 2015 22.41 UTC
Tsy fahita firy izany ho mahatsikaiky bita nandady avy amin'ny muck ny aterineto sy ny kolontsaina ao an-saina ny andavanandro nivory. Indrindra rehefa tonga izany haingana araka "ny akanjo" nanao.
Teo anelanelan'ny alakamisy hariva sy ny zoma maraina, nitombo ny akanjo avy amin'ny lahatsoratra Tumblr amin'ny ny irlandey mozika ny tranga iraisam-pirenena sy ny foto-kevitra ny adihevitra manerana ny tany.
Ny crux ny akanjo fanontaniana, ary angamba ny antso, dia tsotra: dia ny frock fotsy sy ny volamena, na manga sy mainty?
Ny tranga mety ho ny vokatry ny fahadisoan-kevitra Optical tsotra, ny ambiguity, na dia mety ho sarotra kokoa. Na inona na inona ny antony, izany ny sary fa tsy mety na dia fomba fijery mpikaroka mitovy hevitra.
"Maro tokoa ny fahitana sy ny fandrenesana no tena marina,"Hoy Howard C Hughes, izay investigates ny fomba fiasa ny fomba fijery amin'ny College Dartmouth ny sampan-draharaha ny ara-tsaina sy ny atidoha siansa. "Raha tsy izany, tsy afaka mandeha mamaky ny varavarana, ary azo antoka fa tsy afaka mihazakazaka 50 metatra sy hisambotra ny lalitra baolina tany an-tsaha afovoany. "
Raha afohezina, Tsy very saina ianao: ny ankamaroan 'ny zavatra hitanao no olona hahita. Fa Hughes dia mampahatsiahy antsika fa ny zavatra isika dia "mahita" Tsy voatery ho manana ny toetra fototra Fantatray, indrindra rehefa miara-miasa amin'ny voafetra ianao vaovao, toy ny grainy, roa-amin'ny lafiny sary.
Ireo sary ireo mihinana ny rakitra nangonin'ireo ny maso sy ny reassembled amin'ny saintsika, ahitana amin'ny alalan'ny biolojika sy ara-tsaina sarotra lamina.
"Izany dia miteraka, Heveriko fa, ny fihetseham-po izay … fotsiny isika hitanao izay mitranga eo avy tao,"Hoy izy. "Fa manana ny hanorina izany - ny atidoha tsy maintsy hanorina izany - ary tsy maintsy tonga saina ny olona amin'ny fomba tsy misy dikany mila mahita maso, fa mila ny atidoha mba hamantatra, ary mba fomba fijery dia zavatra ny teny. "
Ny akanjo quandary dia mifantoka amin'ny loko, ny fomba fijery fa tsy "tena" isan-se. Ny zavatra niainany ny loko dia ny fomba fijery ny halavan'ny hita taratra hazavana hita taratra avy amin'ny ambonin'ny, raisina ho toy ny iray amin'ireo telo voalohany ny olombelona loko maso.
Ohatra, ny zavatra hitantsika toy ny "mena,"Tsy toetra ao anaty zavatra. Fa, izany ny olona 'homogenous fomba fijery miavaka ny hita taratra hazavana. Ary maro ireo biby izay miaina amin'ny fomba hafa be loko be noho ny olombelona. The eyeballs ny mantis patsabe, ohatra, manana 12 loko mpandray raha oharina amin'ny olona 'telo.
Ary raha ny fanontaniana mety ho toa maivan-danja, Maro no nahita fa ny sary manompo ho toy ny ohatra mahavariana ny interplay ny olombelona sy ny fomba fijery ny toe-batan'ny - constructs izay mahaforona ny sasany amin'ireo saha nianatra indrindra ny atidoha siansa.
"Tsy misy antony ny mieritreritra fa ny tsipiriany rehetra ny dingana mampino fa tsy misy olona tena, tsara ny tsirairay dia tsy manana ny fahasamihafana,"Hoy Hughes. "Ankehitriny, fomba io sary no nanao toy izany ny fanaovana asa mahagaga fa mazava sy mafy - tsy azoko antoka. Heveriko fa ny antony dia hiteraka hafanana be ny olona eo no ankamaroantsika mieritreritra fotsiny isika hitanao izay mitranga eo avy any. "
Hughes hoy ilay foto-kevitra dia azo inoana fa ho iharan'ny fikarohana bebe kokoa, ary hypothesized fa ny manga-fotsy tranga mety ho ny vokatry ny na inona na inona avy amin'ny anomalous trichromats (olona izay manana fomba fijery somary hafa kely ny loko voalohany) ho iray (tena sarotra) ampifamadihina Optical fahadisoan-kevitra, indraindray dia antsoina hoe ny ambiguity.
Na iza na iza no niezaka hanova ny fironana amin'ny convex sy concave faribolana, na ny kofehy ny bikabikany dia hanana hevitra ny sarotra toy izany ny sasany sary dia handrehitra, na "disambiguate".
Fomba fijery iray hafa mpikaroka. Robert Fendrich, nilaza Hughes nahita ny akanjo fotsy toy ny volamena ny alakamisy hariva, ary manga-mainty ny zoma maraina, iray, izay hita ho vitsy an'isa ny olona afaka reorient ny sary. Fendrich dia nitsidika manam-pahaizana ao amin'ny Dartmouth College, koa eo amin'ny ara-tsaina sy ny atidohanao siansa sampan-draharaha.
Ao amin'ny Whitney Laboratory ny fomba fijery sy ny Action ao amin'ny University of California Berkeley, David Whitney hoy ny sary ny vokany dia tsotra - izany ny ambiguity ny inference.
"Infer ny mazava ianao dia mikapoka ny akanjo mivantana, ary infer fa ho avy ny mazava avy any ambadiky ny akanjo,"Hoy Whitney. "Izany raha tsorina ny tena tsotra fahasamihafana, ary izany ny tena tsotra ambiguity. "
"Tena fahadisoan-kevitra,"Hoy Whitney. "Fa ny zavatra rehetra dia fahadisoan-kevitra."